I-TRF kwiCandelo le-2018 I-Foundation Foundation, Uthando, iSondo kunye neInternet
Ikhaya I-TRF kwi-Press 2018
Umshicileli ufumene i-Foundation Reward Foundation kwaye isasaza igama ngomsebenzi wethu kubandakanywa: iiklasi zokuqwashisa i-porn; umnxeba osebenzayo, imfundo yesini esekelwe ebuchosheni kuzo zonke izikolo; imfuneko yokuqeqesha ababoneleli bezempilo be-NHS ekukhuselweni koonografi kunye negalelo lethu uphando kwiziphathamandla zesondo ezibangelwa isondo. Eli phepha libalaselisa impumelelo yethu kumaphephandaba nakwi-Intanethi nge2018
Ukuba ubona ibali eliqukethe i-TRF asizange silibeke, nceda usithumelele inqaku malunga nalo ngokusebenzisa ifom yoqhagamshelwano phantsi kweli phepha.
10 Disemba 2018. Ekuqaleni kukaDisemba 2018 iqela le-TRF laya eBudapest eHungary apho uMary Sharpe wabonisa khona "Impembelelo ye-Intanethi ye-Intanethi kwiMpilo kunye noBudlelwane" kwinkomfa "Ukuthengiswa kwabantu eHungary: Imingeni yangoku kunye nexesha elizayo kunye nezenzo ezilungileyo - Impembelelo Yehlabathi Elikwi-Intanethi ”. 'I-AZ I-INTERNET I-ÁLDOZATTÁ VÁLÁS HATÁRAI ES HATÁSAI AZ EGYÉNRE ES A TASRADALOMRA ', Budapest, 3 December 2018.
Ingxelo epheleleyo ingabonwa Apha.
26 Agasti 2018. UMary Sharpe unikezele ngongcali kwiingcali ezibuhlungu kwiiNkundla zaseScotland. I-Article ebhalwe nguVic Rodrick. Amakhasi 10 kunye ne-11 kwinguqu yokushicilela.
ISILIDI esibhekene ne-SEXUAL ijongene nobomi ejele ngenxa yokudlwengula intambo yamantombazana angaphantsi kunye nabasetyhini abancinci abadibana nabo ngokusebenzisa i-media media.
Kwimeko yaseScotland eyona nto yokuzilungisa e-Scotland, uGavin Scoular wasebenzisa i-Facebook, uSapapchat no-Skype ukuba babe ngabahlobo bexhoba.
Umntu oneminyaka eyi-23 uya kuqala ngeengxoxo ezingenacala - ngezinye iiveki zeeveki-ukuzithembela kwamantombazana ngaphambi kokuba azikhathaze ukuba amthumele iifoto zezesondo.
Emva koko wabumnyama ukuba ahlangane naye ngokusongela ukuthumela imifanekiso kwi-intanethi "kwihlabathi lonke ukuba libone ', ngaphambi kokuxhaphaza nokudlwengula.
Ufunyaniswe enetyala ngoLwesine ngokudlwengula amabhinqa amancinci amahlanu-kuquka a maxhoba ayeneminyaka engaphantsi kwelo xesha.
Ijaji eNkundleni ePhakamileyo e-Livingston nayo yamgweba ngamanye amatyala alishumi, kuquka ukuhlaselwa ngokwesondo, ukuthatha imifanekiso engcolileyo ngaphandle kwemvume kunye nokusongela ukusabalalisa imifanekiso.
Ngethuba lovavanyo lweentsuku ezithoba, ummeli ugxeka uStephen Borthwick, umtshutshisi, utyhafaza u-Scrolar 'i-pedophile' inqabileyo kwaye amangqina anike ama-akhawunti afanayo malunga nezenzo zakhe. Wongezelela: 'Wayezilungisa. I-Gavin Scoular yaxhomekeka kwingxoxo yesondo kunye nabo beyazi kakuhle bephantsi kweminyaka yobudala be-16, ngaphantsi kweminyaka yobudala.
'Wabacela bonke ukuba bambonise imifanekiso yomzimba wabo. Kwezinye iimeko wayebacela ukuba bamthumelele imifanekiso.
'Wasebenzisa loo mifanekiso njengendlela yokulawula ukuziphatha kwabo, ukuba bawenze oko ayekufunayo. Kwimeko nganye wahamba waya kudibana namantombazana. Ngokwamkelwa kwakhe wadibana nabo ngesizathu esinye-esenza into yokuziphatha ngokwesondo. "
Elinye ixhoba lathi wayeyi-13 xa i-Scoular, esuka eNiddrie, e-Edinburgh, idibana nayo. Wambetha ngeemilayezo ezingcolileyo kunye nezicelo ngaphambi kokuba amcele ukuba amthumelele iifoto zeempahla zakhe.
Wathi: 'Ndatsho ngokuthe ngqo kodwa waqhubeka ebuza kwaye ebuza. Ndamxelela ukuba andifuni kodwa ndamthumela umfanekiso xa ndingu 14. Andiyazi ukuba kutheni.
Emva kokuba ndimthumelele owokuqala wayesongela ukuyifaka kwi-media media.
'Wathi ukuba andizange ndimthumelele omnye umfanekiso wayeya kufaka umfanekiso owake wayenawo wonke i-Facebook.
'Kwakwenza ndive ndimele ndiyenze. Andizange ndifune i-boobs yonke kwi-Facebook.
'Emva kokuba ndithumele umfanekiso wesibini waxolisa ngokuthi wayeza kufaka umfanekiso kwi-Facebook, ngoko ndamxolela.'
Wavuma ukuya ekhayeni lakwaScott, apho wamdlwengula khona.
Wathi: 'Ndifuna ukukhala kodwa ndazigcina zonke. Ndandifuna nje ukuphuma apho ngokukhawuleza ukuba ndinako. Ndamxelela ukuba buhlungu. Ndamxelela ukuba ayeke. Waqhubeka ehamba. '
Elinye ixhoba lalingu 14 xa i-Scoular idibana naye nge-webcam.
Ekuqaleni, iingxoxo zabo zaziphathelele izinto zansuku zonke, ezifana nesikolo, kodwa ke wayesongela ukuxoka nabahlobo bakhe ukuba balala ngesondo ngaphandle kokuba bamthumelele isithombe esingcolileyo.
Uthe iScoular yammisa ngokubhinqa amabele ngexesha lengxoxo yevidiyo ye-Skype, kwaye wathatha isikriniBeing
Ndandifuna ukukhala. Ndandisoyika. Ndamxelela ukuba ayeke '
idubule. Ukusebenzisa umfanekiso njengesigxina, wamnyanzelisa ukuba ahlangane naye kufuphi ne-Ocean Terminal eLeith kunye nokuhlaselwa ngokwesondo.
Ixhoba elincinci kunazo zonke ze-scoular yayingu-12 kuphela xa edibana naye ngokusebenzisa i-media media kwaye yamkhuthaza ukuba adibane naye. Bahamba baya e-Portobello Golf Course, apho wamanga waza wamgcoba-nakuba wayesazi ubudala bakhe.
Kwakhona watshela amabini amaxhoba awayebenza njengabagcini bemilondolozi kwiindawo zamabhunga, ekufundiseni abantwana ukuba bahambi.
I-scoular yathi yaye 'yinto ephosakeleyo' kwaye ukuba amaxhoba athi 'amangala' ngam. Wathi bonke babemvume ukulala ngesondo.
Wavuma ukuba ngexesha leempazamo, phakathi kwe-2010 kunye ne-2014, 'wayethandana ngesondo kunye namantombazana amantombazana' kodwa ngoku uvakalelwa 'ngokukrakra' ngawo.
Wathi: 'andiyivuyo into endiyenzile. Kodwa ndiyazi into endiyenzile, kwaye oko ndiyenzile kwakungalunganga. '
Ngobusuku bokugqibela, uMary Sharpe, ulawulo oluphezulu lweqela lephulo loMvuzo weNkcazo, walumkisa ukufikeleleka nokungaziwa - 'uhlobo lokufihlakeleyo' lwamajelo asekuhlaleni avunyelwe ukulungiswa kwe-intanethi ukuba lube lukhulu kakhulu.
Wathi: 'Kulula ukukhwela umntu ngamagama othando kunye nentando ekhompyutheni. Ukuba umntu ucela isithombe, kulula ukuthumela umfanekiso.
UNksz Sharpe wongezelela ukuba abadumileyo njengoKim Kardashian benze ulutsha lucinga ukuba luqhelekile ukuba lulalwe ngesondo.
Uthi: 'Inkcubeko yethu iphathelele ukubonakalisa umzimba wakho kwaye yinto eqhelekileyo yokuba nokuphila kwindwendwe abayifake ngayo. Yiyona nkcubeko eninzi kakhulu. kubonakala ukuba isondo siqhelekileyo kuluntu namhlanje kwaye kwenza kube lula ukuba amadoda athathe abafazi abaselula. Yinkcubeko eyenza ilungele ukuba ibe nesondo.
I-Scoular ekuqaleni yayijongene neendleko ze-132 kunye namantombazana e-100 kunye nabasetyhini abaselula. Abatshutshisi bajolise kwiimpazamo ezimbi kakhulu kwaye kwimeko yokujongana naye wabhekana neentlawulo ze-34. Emva kwamangqina
banike ubungqina babo, u-Scoular wathwesa ityala enetyala, kuquka ukulungiswa ngokokuhlaselwa ngokwesondo ngo-12-ntombazana eneminyaka engama-20 ubudala, ukuxoxa ngesondo nge-intanethi kunye nentombazana ye-14year nge-Skype kwaye ifuna ukuba ithumele imifanekiso engcolileyo.
Kwakhona wavuma izono ezithandathu zesondo ezibandakanya ukulungiswa nokulala ngesini kunye nentombazana eneminyaka eyi-14. KwiNkundla ePhakamileyo ngoLwesine watholakala enetyala lee-7 zokudlwengula amaxhoba amahlanu emva kokuba 'azilungisa' kumajelo asekuhlaleni.
Ijaji nayo yamfumana ityala leetyala ezilishumi ezongezelelekileyo zesondo, kuquka ukuziphatha okungenamthetho kunye ne-libidinous kunye neentlanganiso zeentlobano zesini ezingekho mthethweni.
Emva kokuvalelwa kwetyala kuye kwavela ukuba i-Scoular isebenza isigwebo esinexesha eliyiminyaka emine nesine, esetyenziswe kwi-2014, ngenxa yezenzo ezifanayo ezibandakanya amantombazana amabini angaphantsi.
Igama lakhe liye lafakwa kwiirejista zabenzi becala ngokwesini iminyaka elishumi.
IJaji iNkosi i-Summers ivakaliswe isigwebo kuze kube nguSeptemba 19 kwiNkundla ePhakamileyo yase-Edinburgh.
Wacetyisa u-Scoular: 'Akufanele ube ngaphantsi kobuxoki ukuba ukhangele ixesha elide kakhulu lesivakalisi.'
I-Scoular iya kuphinda ifakwe kwi-rejista yabenzi bezondo kunye nokugqithiselwa.
Nge-25 kaJulayi 2018. UMark Blunden, iNtatheli yeNdaba neTekhnoloji wanika ingxelo elungileyo kuMvuzo weSiseko kunye nomba wokungasebenzi kakuhle kwi-erectile. 11 iphepha Umgangatho waseLondon ngokuhlwa. Ikwathathwe kwakhona yi ENigerian Bulletin.
16 Julayi 2018. UKay Smith wabhala kwakhona iMayili ngeCawa kwinqaku Ixesha.
15 Julayi 2018. UMary Sharpe udliwano-ndlebe kwi-mail yaseScottish ngeSonto malunga nomxholo wezifundo zezikolo eziprayimari eziphuhliswe yi-Foundation Reward Foundation. Page 21. Inguqulelo yedijithali yale nqaku ikhoyo Apha.
15 Julayi 2018. UMary Sharpe wabhala le ngcamango yephepha elipheleleyo. Page 38.
15 Julayi 2018. Inqaku lokuqala lavela kwiSkotsman kwiphepha le-7 kwaye liyabonakala online (isilumkiso: umfanekiso unokubangela ivuso). Inqaku laphinda lathatyathwa yirhafu ngaphakathi ngaphakathi.
4 Julayi 2018. UMary Sharpe noDarryl Mead batyathelwa i-SecEd, i-portal ehamba phambili kwiziko lekondari e-UK. Inqaku lokuqala liyabonakala Apha.
Ngomhla wamashumi amabini anesithandathu kuFebruwari ka-28, uMary Sharpe wenziwa udliwanondlebe kwinkonzo yeendaba yaseSpain kwiTu Cosmopolis.
25 Februwari 2018. Inqaku elibanzi lolimi lweSpanish malunga nefuthe loonografi, ugxila kwi-pornography isebenzisa ibali leGabe Deem, kunye neempendulo ezivela kuDarryl Mead kunye noMary Sharpe, kunye noGary Wilson noDkt Valerie Voon. Inqaku elipheleleyo likhoyo Apha.
4 Februwari 2018
Ibali lifumaneka online ngeCawa leXesha.
Eli bali liye lagijima kwiScottish Financial News kwi-24 uJanuwari 2018